किन जिल्ला नै छाडे ठाकुर र महतोले ? - samayapost.com
किन जिल्ला नै छाडे ठाकुर र महतोले ?
समयपोष्ट २०७४ कार्तिक २६ गते २:२७
पहिलोपल्ट तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका शिवपूजन रायले र दोस्रोपल्ट कांग्रेसका अमेरशकुमार सिंहले उनलाई हराएका थिए । उनलाई पालैपालो हराउने शिवपूजन र अमरेश दुवै सर्लाही ४ बाट क्रमश: माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका उम्मेदवार छन् । सर्लाहीलाई ६ बाट ४ क्षेत्रमा खुम्च्याइएको छ । उनको क्षेत्र ४ नम्बरमा आइपुगेको छ । कान्तिपुरबाट